प्रदेश ७ बाट को-को बन्दै छन् ओलीका मन्त्री ? गणेश ठगुन्ना र नारदमुनी प्राथमिकतामा::Leading Digital News Portal Of State7| Political News, Science, Social, Sport, Economy, Business, Entertainment
प्रदेश ७ बाट को-को बन्दै छन् ओलीका मन्त्री ? गणेश ठगुन्ना र नारदमुनी प्राथमिकतामा
प्रकाशित मिति : बुधबार, फाल्गुन ९, २०७४
कञ्चनपुर, ९ फागुन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा छन् । मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली माओवादी केन्द्र र एमालेका आकांक्षीहरुलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका हुन् । सम्भवतः यो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने ओलीको योजना छ । ओलीले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
संविधानले पनि बढीमा २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउने नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको छ । यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरुको ताति नै लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यतिबेला मन्त्रीका आकांक्षीलाई मिलाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ । सबैतिर मन्त्रीहरुको चर्चा चलिरहेका बेला प्रदेश ७ पनि अछुतो रहन सकेको छैन् । प्रदेश ७ मा पनि मन्त्रीका आकांक्षीबार चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
प्रदेश ७ बाट पनि आकांक्षीको संख्या धेरै छ । विशेषगरी एमालेबाट दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना, एमाले उपाध्यक्ष एवम् एमाले प्रदेश ७ इन्चार्ज भिम रावल, डोटीका सांसद् प्रेम आले, कैलालीका नारदमुनी राना, कञ्चनपुरका डा. दिपक प्रकाश भट्टलगायतको दाबेदारी छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट बीना मगर प्रमुख दावेदार मानिएकी छन् । सम्भवतः उनी प्रदेश ७ बाट माओवादीका तर्फबाट एक मात्र मन्त्रीका दाबेदार हुनसक्छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष रावल ओली पछिको महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर उक्त पद माओवादीले पाउने सम्भावना बढी छ । जसले गर्दा रावल त्यसपछिको बरियतामा पर्न सक्छन् । त्यस्तै दार्चुलाका सांसद् गणेश ठगुन्ना पनि मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन् । अघिल्लो संविधान सभामा पनि उनी कुनै लाभको पदमा बसेका थिएनन् । जसले गर्दा यो पटक मन्त्री बन्नसक्ने प्रवल सम्भावना छ ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखकलाई पराजित गर्दै चर्चामा आएका डा. दिपक प्रकाश भट्ट पनि मन्त्रीका दाबेदार हुन् । यो पटक प्रदेश ७ को प्रदेश सरकारमा समेत कञ्चनपुरले कुनै पनि पद पाएको छैन् । त्यसकारण पनि केन्द्रीय सरकारबाट कञ्चनपुरले न्याय पाउने आश गरिएको छ ।
सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्ने र दुई पार्टीलाई भागबण्डा गर्नुपर्दा पनि मन्त्रीका सबै आकांक्षीले पाउन सक्ने सम्भावना छैन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश ७ ले माओवादीबाट १/२ र एमालेबाट २/३ तीन जना मन्त्र बन्न सक्छन् । त्यो सूचीमा को को पर्न सक्छन्, त्यसको लागि यो सातासम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा सात महिनादेखि तालाबन्दी
भीमदत्तनगर। प्रदेशस्तरको एउटा विश्वविद्यालयमा सात महीनादेखि तालाबन्दी यथावत छ भन्दा आश्र्चय लाग्न...